यती एयरको जहाज स्यालसँग ठोकियो ! अायाे यस्ताे खबर - hamro Desh
यती एयरको जहाज स्यालसँग ठोकियो ! अायाे यस्ताे खबर
काठमाडौ । यती एयरको जहाज स्यालसँग ठोकिएको छ । चरामा विमान ठोकिएको, बादरसँग विमानस्थलमा ठोकिएको त कहिलेकाही समाचार आएकै हुन् । तर स्यालसँग ठोकिएको खबर आउँदा सबैलाई चकित भएको छ । तर यो खबर सत्य हो । त्योपनि नेपालगन्ज जस्तो विकसित सहरको विमानस्थलमा जहाज स्यालसँग ठोकिएको छ । यती एयरलाइन्सको एटीआर ७२ जहाज नेपालगन्ज विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा थियो। यही क्रममा स्यालसँग ठोकिएको विमानस्थल कर्मचारीले पुष्टि गरेका छन् ।
केहीबेरपछि विमानस्थलको रन–वेमा स्यालको रगत र मासुका टुक्रा देखियो। तत्कालै रन–वेमा दमकल लगाएर सफा गरेको विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर बताउँछन्। विमानस्थल टावरलाई जहाजमा स्याल ठोकिएको थाहा थिएन।
तर, पाइलटले स्याल ठोक्किएको खबर गरेपछि मात्रै विमानस्थल कार्यालयलाई थाहा भएको उनको भनाइ छ। जहाजमा स्याल ठोक्किए पनि कुनै मानवीय क्षति भएन। जहाजमा पनि कुनै ठूलो क्षति नपुगेको ठाकुरले बताए। एयरलाइन्सको प्राविधिक टिमले जहाजमा कुनै क्षति नपुगेको निष्कर्षपछि जहाज पुन काठमाडौं फर्किएको थियो । यो घटनाले अब स्यालहरु बस्ने जंगल सकिदै गयो । सहर पस्न थाले छन् की क्याहो ।